TAAGEERO SIYAASADEED IYO KAALMO DHAQAALE OO XUKUUMADDA KMG AH DHOWAAN SOO GAARTAY
Wasiirka Arrimaha Dibedda ee Xukuumadda Soomaaliyeed ee KMG ah Ismaaciil Maxamuud Hurre (Buba) wuxuu shalay ka sheegay Muqdisho inay dhowaan Xukuumadda KMG ah ka soo gaartay Dalalka Carabta qaarkood taageero siyaasadeed iyo dacmi dhaqaale oo dhan 18,000,000/= oo doollarka mareykanka ah.
Sideed iyo tobankaas malyan oo loogu talagalay mashaariicda dib-u-dhiska Wasaaradihii iyo Hay'adihii Dawladda ee burburay iyo sugidda nabadgelyada, waxaa 15 malyan bixisay Boqortooyada Sacuudiga , halka Dawladda Qadar ay ka bixisay 3 malyan oo doollar .
Sida laga warqabo, Sanduuqa Horumarinta Sacuudiga wuxuu hadda ka hor ugu meeleeyay mashaariicda dib-u-dhiska Soomaaliyeed adduun dhan 150 malyan oo Doollar oo uu hadba bixiyo qaybta markii mashruuc dhamaadaba .
Wuxuu kaloo Wasiirka ku sheegay hadalkiisa ,oo ay qortay Jariidada Al-Khaliij maanta 12ka June 2001,in madaxdii Carbeed ee uu dhowaan la kulmay ay dhamaan u caddeeyeen sida ay u taageersan yihiin Xukuumadda KMG ah, isagoo isla markaana carabaabay in Dawladda Muqdisho ay mudnaan gaar ah siineyso inay calaaqaad wanaagsan la lahaato dalalka deriska ah oo ay Ethiopia ugu horreyso,taas oo ku dhisan mabda'a ah in dalna uusan faragelin dal kale arrimo u gaar ah .
Wuxuuna Buba ula jeedaa arrintan xiisadda ka oogan beryahan goobo ka tirsan gobolada Koonfureed iyo ciidamada heeganka ah ee Dawladda KMG ah geysay meelahaas , si loo adkeeyo difaaca dalka.
Waxay ugu danbeyntii Jariidada hadalkeeda ku soo gebegebeysay beenin uu beeniyay Madaxa Warfaafinta Madaxtooyada Soomaaliya Cabdiraxman Nur Maxamed hadal hadda ka hor loo nisbeeyay Cabdilqaasim Salaad Xasan oo ay qortay isla Al-Khaliij oo la xiriiray Eedeyntiisii ku wajahneyd Cali Khaliif iyo Xukuumadda uu madaxda ka yahay.
Wuxuu Cabdiraxmaan ku tilmaamay akhbaarta noocaas oo kale ah inay yihiin kuwa ka soo horjeeda maslaxada iyo horumarka iyo midnimada shacabka Soomaaliyeed.